စေတီတစ်ဆူ၏ အခေါ်အဝေါ် | အိမ့်မှူးသော်
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး စေတီမှာရှိတဲ့ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေ သိသင့်တာပေါ့နော်။ မသိသေးသောသူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ချစ်စံအိမ် 7:16 PM
Thank you. Would you mind if I copy it?
mhuthaw 11:49 AM
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုက်သလို ရှယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ........
T 3:47 AM
ကိုအိမ့်မှူးသော်ရဲ့ ဘလော့အကြောင်း VOA မြန်မာနပိုင်းရဲ့ ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှမှာ အစီအစဉ်လုပ်ချင်ပါတယ်၊ ဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ ရမလဲ သိပါရစေ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
mhuthaw 9:22 PM
ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ စုမြတ်မွန် ကျွန်တော် nothateme51@gmail.com နဲ့အပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ.....ကျွန်တော်က ဘလော့ဂါကြီးတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ.....၀ါသနာရှင်အဆင့်ပဲရှိပါတယ်....
phoo chwar 4:24 PM